तनाव कम गर्न अपनाउनुस् यी ६ उपाय – Sodhpatra
धनगढी मेयरमा करोडको गाडी चढेर धुलो उडाउने रोज्नेकी, जनतासंगै धुलोमा हिँड्नेलाई रोज्ने ?
कैलालीको भजनी ८ मा रोचक मत परिणाम, टिमै पिच्छे समान मत
धनगढीका स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाल २२० मतले अगाडी, काँग्रेसका वडा अध्यक्षको अग्रता
धनगढी उप-महानगरका स्वतन्त्र मेयर पदका उम्मेदवार गोपाल हमाल लगभग जित्ने पक्का…
धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालको अग्रता कायमै, कति मत पाए ?
केजी हस्पिटलले पहिले उपचार त्यसपछि पैसा भन्ने गरेको छ : डा. सिंह (भिडियो सहित)
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरियो, कैलालीमा २ अर्ब ६४ करोड लगानीमा केबलकार बन्दै
मङ्गलवार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै, के-के गर्न पाइँदैन ?
प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमद्धारा विभिन्न तहमा कर्मचारी माग, कुन पदमा कति ?
सुदूरपश्चिमका पाँच पहाडी जिल्लाका मतदान केन्द्रमा झडप, रोकियो मतदान
दोधारा चादँनी ६ को वडाध्यक्षमा एमालेका बस्नेत प्यानलसहित विजयी
आज २५६६औँ बुद्ध जयन्ती : सिद्धार्थ गौतमको पूजा आराधना प्रवचन गरी मनाइदै
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमका २ पालिकामा जित्यो नेतृत्व
कैलालीमा काँग्रेस नेता ‘डोटेली कान्छा’ को वडामा काँग्रेस प्यानललाई तेब्बर मत
धनगढीका स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाल दोब्बर मतले अगाडि, कुन उम्मेदवारले कति मत पाए ?
उम्मेदवारको दाबेदारि गर्ने धेरै भए तर गाउँ समाज र देश निर्माणको लागि खबदारि गर्ने कोही भएन
कैलालीको गोदावरीको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी
धनगढी ३ को अध्यक्षमा काँग्रेसका ऐर सहितको प्यानल नै विजयी
पाँच वर्ष पुर्चौडीमा सत्ता सम्हालेको माओवादीलाई हराउँदै प्रमुख र उप-प्रमुखमा काँग्रेस विजयी
काँग्रेसलाई २७१ मतले पछि पार्दै कैलालीको गोदावरी ६ मा एमालेका चौधरी पुरै प्यानल सहित विजयी
बैतडीको पुर्चौंडी ४ भटनामा एमालेका दिलबहादुर धानुक ‘विकास’ प्यानल सहित विजयी
एमाले बैतडीले चिन्न नसकेका सन्तोष डिलाशैनीवासी जनजनको मनमनमा बसेपछि…!
बैतडीको दशरथचन्दको मेयरमा एमालेका ‘लख्खाभाइ’ र उपमेयरमा कांग्रेसकी कौशिला विजयी
प्रकाशित : १४ भाद्र २०७८, सोमबार २३:३६ August 30, 2021
काठमाडौं: शारीरिक श्रमको कमी, तनाव, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखाइको समस्या पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
जसले गर्दा तपाईंको काम प्रभावित हुन सक्छ भने समयमै वास्ता गरिएन भने भने यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । टाउको दुखाइका लागि तपाईले घरेलु उपचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईंले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
माइग्रेनको उपचारमा पुदिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । पुरानो समयमा पनि टाउको दुखाईको उपचारको लागि पुदिना दिने गरिन्थ्यो । यदि तपाईंलाई लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने तपाईंले पुदिनलाई चियामा मिसाएर पिउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई तुरुन्त राहत प्रदान गर्छ ।
ल्वाङ र नुनको प्रयोग
टाउको दुखाईका लागि ल्वाङ र नुनको पेष्ट एक प्रभावकारी उपचार पद्धती मानिन्छ । ल्वाङको पाउडर र नुनलाई दुधमा मिसाएर पिउनुहोस् । नुनमा हाइग्रस्कापिक गुण पाइन्छ जसले टाउको दुखाईबाट आराम मिल्दछ ।
टाउको दुखाईबाट आराम पाउनका लागि दालचिनी पाउडर पेष्ट एउटा राम्रो तरिका हो । उपयोगका लागि दालचिनी पिसेर पाउडर बनाउनुहोस् र यसलाई पानी हालेर बाक्लो पेष्ट बनाउनुहोस् । अब यो पेष्टलाई टाउकोमा लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको दुखेर भारी भएको टाउको छिट्टै हल्का हुन्छ ।
लसुनको रस पिउँदा लगातार दुख्ने तपाईंको टाउकोले राहत महसुस गर्दछ । यसलाई तयार गर्नका लागि लसुनका केही टुक्रा लिनुहोस् र यसलाई निचोरेर रस निकाल्नुहोस् र कम्तीमा पनि एक चम्चा रस पिउनुहोस् । वास्तवमा लसुन एक पेनकिलर पनि हो, यसले टाउको दुख्न कम गराउँछ ।
जीरा र अदुवाको रस
धनियाँको पात, जीरा र अदुवा राखेर बनाएको चिया पिउनाले पनि लगातार दुखिरहने तपाईंको टाउको कम हुने गर्दछ । यसलाई बनाउनका लागि थोरै तातो पानी लिनुहोस् र यसमा धनियाँ, जिरा र अदुवा यी तीनथरी हालेर पाँच मिनेटसम्म उमाल्नुहोस् । राम्रो परिणामका लागि यसलाई कम्तीमा पनि दिनको दुई पटक पिउनुहोस् ।
कपालमा चाया परेर समस्यामा हुनुहुन्छ, यस्ता छन् चाया हटाउने घरेलु तरिका ?
पुरुषभन्दा फरक महिलाका १० क्षमता
तपाइँलाई अनुहार सफा गर्न आउँछ ? यस्तो छ तरिका
सुत्दै हुनुहुन्छ, यस्ता छन् बिना कपडा सुत्नुका फाइदाहरु ?
अनार खाँदा हृदयघातको खतरालाई कम गर्न सकिन्छ
मानसिक रोग : कति प्रकारको हुन्छ फोयिबा, आधारहीन डर यसको कारण र उपचार के ?
यी हुन् बिहान सबेरै उठ्दा हुने फाइदा
DoIB Regd No: 00/077–78
OCR Regd No: 241036/077–78
PCN Regd No: 0000
Tweets by sodhpatra.com